Saado Cali ?dowladda Puntland ha xaliso tabashada shacabka Sool, Sanaag iyo Cayn.? (dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2013 4:08 b 0
Muqdisho, November 6, 2013 – Xillibaan saado cali warsame oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka Soomaaliya ayaa ka hadashay xaalada Puntland oo xilligan u diyaar-garoobaysa doorashadii Afraad oo ku dhacaysa habka beelaha, saado ayaa diirada saartay dhinaca gobolka Sool.
Xildhibaan saado cali warsame waxay ka hadashay arrimaha murashaxiinta oo ay ugu baaqday inay si nabad-gelyada ku tartamaan, ?waxaan ugu baaqayaa murashaxiinta in ay doorashada nabad-gelyo ah galaan, isla maraaska iska ilaaliyaan hadallada deel-qaafka ah.? Iyadoo daljir u waramaysay ayey hadalkeeda sidaas ku dartay.
Dhinaca ?xillibaan Saado Cali waxay ka hadashay arimaha siyaasadeed ee deegaanadda Sool, Sanaag & Cayn iyadoo wax ka taabatay ?go?aan ka soo baxay qaar kamid ah odoyaasha dhaqanka ee goboladda ?Sool, Sanaag & Cayn kaas oo lagu sheegay in aysan ka qayb-geli dooonin dadka deeganadaas doorashada dhici doona, isla markaasna aysan xilibaano iman doonin Puntland.
?Wixii aad tabanaysaan waa in aad kala hadashaan Puntland waayo arrintaani waxay ka dhalatay tabasho, Aniga waxaan aamisannahay gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn inay ka tirsan yihiin Puntland.? Xilibaan saado ayaa Puntland ugu baaqday in ay wax ka qabato tabashada dadka gobolladaas.
Waxay tilmaantay in deegaanadaasi aysan Puntland ka bixi doonin deegaanadaasi, iyadoo maamulka ugu baaqday in la xaliyo wixii tabasho ah ee jira.
Geesta kale Saado Cali waxay baaq u dirtay Musharaxiinta u tartamaya xilka Madaxweyne nimo ee Puntland, iyadoo ugu baaqday inay nabadgelyadda ilaaliyaan.
Dhegeyso: Xillibaan Saado Cali warsame ?oo u warantay Jamaal faarax oo daljir ka tirsan